1. Salmon bụ ihe kachasị dị njikere iji ihe. Ọhụrụ salmon fillet Enwere friji dị na ya maka nri abalị. Ma ọ bụ nri ehihie dị mfe E nwekwara ike iji ya esi nri nri dị iche iche Ka anyị lelee otu esi eme salmọn dị mfe, nwunye ụlọ ma ọ bụ onye isi nri. Nwere ike ime ya nkasi obi
2. Otu esi akwadebe n'ụzọ dị mfe tupu ịme
3. Nke mbụ, akụrụngwa ga-adị njikere. Iji jikwaa nkịtị na nnukwu salmon fillets Havekwesịrị ịdị njikere ịzụta spatula nke dị ntakịrị karịa ka ọ dị na mbụ. Were ya dị ka nnukwu i nwere ike ịchọta, otu esi ahọrọ ya, were ya Ọ ghaghị ịbụ spatula nke nwere ike ibuli ma tụgharịa ọtụtụ anụ na pan. Na azụ azụ azụ nwere ike scooped ma ọ bụ bufee ya na efere ndị mara mma. Ma ọ bụ ọ bụrụ otú ahụ ka mma Zụta spatula maka ị nweta azụ azụ azụ Ezubere nke a maka ebumnuche a, ọ bụ n'ezie ezigbo nhọrọ.
4. Emechaa, m chọọ “pan pan” nke ga-adị mma maka ebe a na-egbu anụ. Mgbe ahụ itinye ya na oven, a ga-ahụkwa nke ahụghị nke ọ bụla dị mma. Chọọ nke nwere ike ịbanye n'ime ọkụ ọkụ. Nhọrọ ọzọ dị mma bụ pan nke frying na efere e wusiri ike. Gbaa mbọ hụ na e mebughị ígwè pan ahụ, gbagọọ agbagọ. Mgbe ekpughere ya n'oké okpomọkụ na oven Na wavy ụdị (ke ndise) bụkwa adabara grilling.
5. Nke ahụ bụ ihe ọzọ dị oke mkpa. Obere agịga imi (Nke ahụ dị ka tweezers) enwere ike iji wepụ ọkpụkpụ nzụ azụ. Họrọ oke kwesiri, na-adịgide adịgide, ogo ga-abụ nke kachasị mma. N'ihi na ọkpụkpụ ntụtụ salmon siri ike Na iwepụ ọkpụkpụ ahụ ga-adị mma n'anya Iji nweta ederede mara mma
6. Ihe ikpeazu bu iji dozie akwukwo akwukwo akwukwo ma obu akwukwo alumini. Iji jiri azụ azụ azụ nke anyị ga-etinye n'ime oven (azụ en papillote) yana maka pan pan pan.
7. Mbepụ nke salmọn.
8. Debe mpempe salmon na bọọdụ ahụ. Nnukwu osisi Ma ọ bụ ịnwere ike itinye ya na foil na tebụl kichin. Ihe nhazi bu Debe akpụkpọ ahụ ihu. (Ọbụna na-enweghị akpụkpọ ahụ) ma were aka gị metụ obere ọkpụkpụ na-apụta apụta iji hụ ebe ọ dị. Ma mgbe ahụ ọ na-amalite na oke akụkụ nke anụ Site n'iji ihe eji agịga eme imi jide ọgwụgwụ ọkpụkpụ siri ike ma dọpụta ya.
9. Isi nri salmọn na stove bụ ụzọ kachasị mfe. Ọ bụrụ na ịnweghị ma ọ bụ achọghị iji oven Banyere usoro nri, ọ gụnyere SAUTEING na POACHING.
10. SAUTE Salmọn Sautéing, gbanye ngwa ngwa site n'ịgbanye azụ naanị 1-2 ugboro site na iji oke okpomọkụ. Usoro a dị mfe ma dịkwa ngwa esi nri. Tozọ isi mee ya bụ ndị a
11. Agbazekwa 1 tablespoon nke butter na saucepan karịrị ọkara okpomọkụ. Chere ka butter daa ma gbanye ngụkọta ọla edo gbara ọchịchịrị, ihe dị ka nkeji 3.
12. Wunye nnu na ose n'ime pan ahụ, chere 6 nkeji ruo mgbe azụ ghọrọ pink na aja aja. Gbanwee azu Aka ekpe na pan (Ejilaghachi azụ azụ wee pụta) Chere ruo mgbe esiri ya ị nụrụ ụtọ, nkeji abụọ ruo anọ.
13. OKPỌTA bụ salmọn agwakọta nke ga-enye gị agba dị mma na nke mara mma. Ọ bụkwa ụzọ dị mma iji mee ka azụ sie ya n’ụzọ zuru oke n’enweghị abụba. Basiczọ bụ isi bụ ndị a.
14. Tinye azu azu na pan. Ekem tinye mmiri na pan iji kpuchie azụ azụ Na-esote, fesaa nnu, ose na mmiri akwukwo (cardamom).
15. Simmer dị ntakịrị na ngwa ngwa, wee gbanyụọ ọkụ, kpuchie pan ma mee ka azụ ahụ sie. Ọ na-ewe ihe dị ka nkeji 20-30. * N'okwu a, salmọn ahọpụtara kwesịrị ịbụ nke ọkara buru ibu.